से'क्सको कल्पना कसले गर्छन बढी, केटाले कि केटीले ? | News Polar
से'क्सको कल्पना कसले गर्छन बढी, केटाले कि केटीले ?
न्यूजपोलार कार्तिक ०६, २०७६, बुधबार
काठमाडौं । युवकहरुले मात्र होइन युवतीहरुले पनि यौ'न कल्पना गर्ने र त्यसको मात्रा केटाहरुको भन्दा बढी हुने एक अध्यनले देखाएको छ । यद्यपी केटा र केटी दुवैले यौ'न सम्बन्धी कल्पना गर्दा करिव करिव उस्तै कल्पना गर्ने अध्यनको निष्कर्ष छ ।
आधुनिक केटा केटीहरुको यौ'न सम्बन्धी अधिकाँश कल्पना अश्लिल चलचित्रमा आधारित हुने र उनीहरु त्यस्तै कल्पनामा रमाउने गरेको स्वेडेनको उप्साला विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले पत्ता लगाएका हुन् ।
अ'श्लिल चलचित्र हेर्ने युवा युवतीले त्यस्ता चलचित्रमा देखाइएका गतिवधीलाई वास्तविक जीवनमा अभ्यास गर्नेबारे सोंचिरहने शोधकर्ता माग्दालेना मात्तेवोले बताए ।
पछिल्लो अध्यनबाट निस्केको निष्कर्षले मानसिकस्तरमा लै'ङ्गिक समानता आइसकेको देखाएको समेत उनको दावी छ । मात्तेवोले स्वेडेनका १६ वर्ष माथिका ८ सय युवतीमाथि यौ'न सम्बन्धको अनुभव र अ'श्लिल चलचित्रबारे अध्यन गरेका थिए ।
१० मध्ये एक युवतीले आफूले हेर्नु पर्ने भन्दा कम अ'श्लिल चलचित्र हेर्ने गरेको अध्यनका क्रममा बताए । त्यतिमात्र होइन युवतीहरुले गर्ने से'क्सको कल्पना कतिपय अवस्थामा युवकहरुले गर्ने भन्दा पनि बढी रहेको उनले पाए ।
अध्यनको अ'नौठो निष्कर्ष त परंपरागत मै'थुन र मुख मै'थुनको अनुभव केटाहरुमा भन्दा बढी केटीमा पाइयो । यद्यपी से'क्स पार्टनर भने केटीको तुलनामा केटीहरुले बनाएको पाहियो ।
यो शोध जर्नल अफ डेभलपमेन्टल एण्ड विहेवियरल पेडयाट्रिक्समा छापिएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ०६, २०७६, १७:१६:३१